Oplus မှတဆင့် Oneplus2update လုပ်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနည်း | Androidsis
Oplus မှတဆင့် Oneplus2update ကိုပြproblemsနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်
Francisco Ruiz | | OnePlus, လဲ tutorial
မိနစ်အနည်းငယ်အကြာသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ပြီးပြည့်စုံသောပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Oneplus2ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဤနှစ်၏မျှော်မှန်းထားဆုံးဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့သိထားသောမေးမြန်းစုံစမ်းမှုများကိုရရှိပြီးဖြစ်သည် Oneplus2သည် OTA မှတဆင့်ပြproblemsနာများကိုအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းတရားဝင် Oneplus ဝက်ဘ်ဆိုက်အပြင်ဘက်ရှိ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များတွင် ၀ ယ်ယူထားသောဆိပ်ကမ်းအချို့တွင်ပြproblemsနာများရှိသည်။
ဒီပို့စ်အသစ်ကိုလက်တွေ့ကျသင်ခန်းစာအဖြစ်၊ ရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တောင်ဘယ်လိုသင်ရမယ်ဆိုတာကိုငါသင်ပေးမယ် OTA မှတဆင့် Oneplus2update လုပ်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းပါဒီလက်စွဲကိုလက်ဖြင့်ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်းနဲ့လက်စွဲဖြင့်ရယူခြင်းဖြင့်ရရှိတဲ့ဒီအသစ်စက်စက်ကိုသုံးစွဲခြင်းဖြစ်တယ် terminal ၏တရားဝင်အာမခံကိုမထိခိုက်ပါ.
1 အဘယ်ကြောင့် OTA နောက်ဆုံးသတင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ Oneplus2အတွက်အလုပ်လုပ်မနေသနည်း။
2 Oplus မှတဆင့် Oneplus2update လုပ်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနည်း
အဘယ်ကြောင့် OTA နောက်ဆုံးသတင်းများသည်ကျွန်ုပ်၏ Oneplus2အတွက်အလုပ်လုပ်မနေသနည်း။
အကြောင်းပြချက် OTA updates များသည်အချို့သော Oneplus2မော်ဒယ်များတွင်အလုပ်မလုပ်ပါအခြေခံအားဖြင့် ဒီမော်ဒယ်များကိုနှောင့်ယှက်ခဲ့ကြပေမည်, Oneplus2၏ကိုယ်ပိုင်အွန်လိုင်းတရုတ်စတိုးများကမသိသောရည်ရွယ်ချက်မရှိသော်လည်း။
ကျွန်ုပ်တို့၏ Oneplus2သည်အလေးချိန် ၄၀ mb ခန့်ရှိသောအသစ်ပြောင်းလဲမှုကိုတွေ့ရှိပါက download နှင့်၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်ပြန်လည်စတင်သည့်အချိန်တွင်၊ update သွင်းမှုမအောင်မြင်ပါစိတ်အချရဆုံးအရာတစ်ခုမှာကျွန်ုပ်တို့တွင် Oneplus2ရှိပြီးဖိတ်စာများမလိုအပ်ဘဲ၎င်းတို့ကိုရောင်းသောအထက်ဖော်ပြပါအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုမှပြုပြင်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းကိုပြုပြင်ထားသောသဲလွန်စကိုကျွန်ုပ်တို့အားပေးမည့်အသေးစိတ်တစ်ခုသည်ထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်သည် သငျသညျ Tube app ကိုဗားရှင်းအဟောင်း, သောမြည်းနဲ့တူအလုပ်လုပ်တယ်နှင့် အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကို update လုပ်ဖို့တောင်ခွင့်မပြုပါဘူး ကစနစ်ထဲတွင်ပါဝင်သည်ကတည်းက။
ဤဆောင်းပါး၏ထိပ်ရှိပူးတွဲပါဗီဒီယိုတွင်ရှင်းပြသည့်အတိုင်းသင့်အတွက်တရားဝင်ဖိုင်များပေးမည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Oneplus2ကိုလုံးဝသန့်ရှင်းပါထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကို update လုပ်ရန်သွားနေကြသည် နောက်ဆုံးပေါ် Oxygen OS 2.0.1 အားနည်းချက်များနှင့်အတူနှစ် ဦး စလုံးအဘို့အတညျ့ စင်ကာပူ ကဲ့သို့ Certifi- ဂိတ်. ထုတ်ကုန်၏တရားဝင်အာမခံချက်ကိုဆုံးရှုံးခြင်းမရှိဘဲ OTA မှတစ်ဆင့်အနာဂတ် update များကိုမှန်ကန်စွာဖွင့်ထားခြင်းမရှိဘဲပြproblemsနာများမရှိဘဲ !!.
Oplus မှတဆင့် Oneplus2update လုပ်ခြင်းပြproblemsနာများကိုဖြေရှင်းနည်း
ပထမဆုံးလုပ်ရမှာက Oneplus မှတိုက်ရိုက်ဖြန့်ချိသည့်နောက်ဆုံးပေါ် firmware ကို download လုပ်ပါ မင်းရဲ့ Oneplus2အတွက် ဒီ link ကနေတိုက်ရိုက်နှင့်။ ဒါက Rom နဲ့ပြည့်စုံတယ် firmware Oxygen OS 2.0.1 အခြေခံ အန်းဒရွိုက် 5.1.1 Lollipop ကျွန်ုပ်တို့၏ Oneplus2သည်တရုတ်အွန်လိုင်းစတိုးများမှကိုင်တွယ်သောခြယ်လှယ်မှုမှလုံးဝသန့်ရှင်းလိမ့်မည်၊ တစ်ချိန်တည်းမှာ Stagefright နှင့် Certifi-Gate တို့၏အားနည်းချက်များကိုပြုပြင်ပေးလိမ့်မည်။ အနာဂတ်အတွက် OTA မှတဆင့် update များ၏ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းလိမ့်မယ်.
ဒီတရားဝင် firmware ကိုပြောရမည်ဖြစ်သည် တရားဝင်ထုတ်ကုန်အာမခံကိုပျက်ပြယ်မှာမဟုတ်ဘူး အဖြစ်ဘာလဲ ကျွန်ုပ်တို့၏ install လုပ်ထားသော applications များနှင့်လက်ရှိ system data များကိုလေးစားပါလိမ့်မည်.
Oneplus 2.0.1 အတွက်တရားဝင် Oxygen OS2firmware ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးသည်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့သာလုပ်ဆောင်ရမည် Oneplus2၏ Downloads ဖိုင်တွဲတွင် decompress မလုပ်ပဲ၎င်းကိုကူးယူပါ နှင့်ဤပို့စ်၏ခေါင်းစဉ်ပူးတွဲဗီဒီယိုထဲမှာငါညွှန်ပြသောအဆင့်များလိုက်နာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » OnePlus » Oplus မှတဆင့် Oneplus2update ကိုပြproblemsနာများအတွက်ဖြေရှင်းချက်
အဲဒါကို unzip လုပ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါမှားသွားတယ်
ကျွန်ုပ်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပါပြီ။ တစ်ခုသာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုထဲမှနှစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အောက်ပါ OS 2.0.1 ဗားရှင်းရှိပါကဖုန်းကို၎င်းသည် ota မှတဆင့်ကူးယူနိုင်ပြီး၎င်းကိုကျွန်ုပ် download လုပ်၍ ၎င်းကိုကျွန်ုပ် install လုပ်၍ မရပါ။
Mister Lip (@ MRTW80) ဟုသူကပြောသည်
ငါခြေလှမ်းများအားလုံးနှင့်အဆင်ပြေသွားပါပြီ။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည်ဆိုင်းငံ့ထားသည့် update ကို 8.9mb (¿¿ ???) ရှိကြောင်းနှင့်၎င်းကို update လုပ်ရန်ပြောသောအခါယခင်ကဲ့သို့ (as ¿ ???) ထပ်မံမအောင်မြင်ပါက ငါဘာသာစကားတွေဆုံးရှုံးသွားတယ် (ဥပမာလစ်သူယေးနီးယားအခုမရှိသေးဘူး)
Mister Lip ကိုပြန်သွားပါ (@ MRTW80)
ကျွန်ုပ်ဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးပါပြီ။ တစ်ခုသာဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးဖြစ်သည်။ ဗီဒီယိုထဲမှနှစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ငါ့ကိုဒေါင်းလုပ်မရတဲ့တစ်ခုကတော့ oneplus2oxygen_14.zip ဖြစ်တယ်။ ငါ့ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ထားတဲ့သူနဲ့ပဲလုပ်ဖို့ကူညီလား၊ နှစ်ခုလုံးဖြစ်သင့်လား။
ဒါပေမယ့်အသစ် update ကိုနေဆဲ, update ပြီးနောက်, ပျက်ကွက်။ ဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲလို့သင်စဉ်းစားပါသလား။
ROM အပြည့်ကို install ပြီးတဲ့အခါမှာ app အားလုံး update လုပ်ဖို့စောင့်ပါ။ အက်ပ်များတပ်ဆင်ပြီးပါကအသစ်ပြောင်းခြင်းကိုတပ်ဆင်မည်။ AND VOILÁ! နှောင့်ယှက်ခံ ROM ကိုအဘယ်သူမျှမသဲလွန်စ။ မင်းရဲ့အကူအညီအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
JavierRamos (@CurranteLiberal) ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ၊ ပြန်လာပြီးသူတို့ကို bea ရှင်းပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်ခဲ့တာ၊ ငါမင်းကိုဖတ်ပြီးပြီ၊ မင်းပြောသလိုပဲ app တွေကို update လုပ်တာပဲ။
JavierRamos (@CurranteLiberal) ကိုစာပြန်သည်
Bea, သင်2ဖိုင်များကို download လုပ်ခဲ့တာလဲ မင်းဘယ်လိုအသေးစိတ်ရှင်းပြပြီးပြီလဲ။
ကျွန်ုပ်ဖုန်းကိုဖိတ်ကြားချက်ဖြင့် ၀ ယ်လိုက်သည်။ ဖုန်းကို update လုပ်သည့်အခါ၎င်းကိုနှိပ်လိုက်သည်။ ၎င်းကိုထည့်သွင်းလိုက်သည်၊ ၎င်းကိုတပ်ဆင်လိုက်သည်။ သို့သော်ဖုန်းသည်တြိဂံများနှင့်ဘီးများဖြင့် ၂ နာရီခန့်ကြာအောင်နေခဲ့ပြီးဘာမျှမလုပ်ခဲ့ပါ။
ဖိုင်တစ်ဖိုင်တည်းသာဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ တစ်ခုသာလုပ်လို့ရလား။ ငါပျောက်နေသည့်အရာကိုဘယ်မှာကူးယူရမည်နည်း။
OP2 မှထွက်ခွာရန်ဖိုင်တစ်ခုတည်းနှင့်လုံလုံလောက်လောက်သင်ဖြေရှင်းပြီးပါကဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းပြုလုပ်ရုံသာဖြစ်သည်။ ၎င်းပြီးဆုံးသည်နှင့်တပြိုင်နက်ကိရိယာ၏အသုံးချပရိုဂရမ်များအားလုံးကိုအသစ်မွမ်းမံရန်စောင့်ဆိုင်းနေသည်။ အလိုအလျောက်သင်သည် play စတိုးအက်ပလီကေးရှင်းထဲသို့ဝင်ရောက်ပြီးကျွန်ုပ်၏အသုံးချပရိုဂရမ်များနှင့်ဂိမ်းများကိုရှာနိုင်သည်။ OTA ကိုပုံမှန်အတိုင်း download လုပ်ပြီးဖုန်းသည်အဓိကပြproblemနာမရှိဘဲ update လုပ်လိမ့်မည်။
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ငါမှာအရေးတကြီးမေးခွန်းရှိတယ် ငါ့မှာ OxygenOS 2.1.0 ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်သည်တရားဝင် OxygenOs 2.0.1 ကို install လုပ်သင့်ပါသလား။ သို့မဟုတ်ငါ 2.1 ပြီးနောက်တစ်ခု install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါသလား?
ဟယ်လို။ ငါမိုဘိုင်းဖုန်းကို gearbest ဖြင့်လွန်ခဲ့သောတစ်လခန့်က ၀ ယ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏အောက်စီဂျင်ဗားရှင်းမှာ ၂.၁.၀ ဖြစ်သည်။ ဒါကအတူတူပါပဲ? ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို download လုပ်ပြီး၎င်းကိုတပ်ဆင်သောအခါ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကို reboot လုပ်ပြီးအမှားတစ်ခုပေးသည်။ ပြီးတော့နှစ်ခုနှစ်ခုကသုံးခုကိုကျွန်တော်ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာကြော်ငြာတယ်။ မင်းပြောတာကိုငါလုပ်ရင်ငါ့ဖုန်းမှာရှိတဲ့အချက်အလက်တွေပျောက်သွားတယ် (ဓါတ်ပုံ၊ တေးဂီတ ... ) ???
Moto 360 2015 အသစ်ကိုစက်တင်ဘာ ၈ ရက်တွင်တင်ပြမည်